Izindaba - Isilawuli esingenantambo sihambisana ne-PS-4/PRO/SLIM/PC
Ipulatifomu ehambisanayo: Isilawuli esingenantambo se-PS-4 sihambisana ngokugcwele ne-PS-4/Pro/Slim/PC.
Inguqulo engu-2021: Umthamo webhethri uthuthukiswa waba ngu-1000mAh, futhi ibanga lokulawula lingaba ngamafidi angama-32.Amamotho wokudlidliza akabili, izinti zokujabula, isikrini esithintwayo, ukuzwa kwenkinobho, imithelela yomsindo, nokuzwela konke kuthuthukisiwe, njalo kuhlinzeka ngokulawula okunembayo kanye nokuzizwisa kwegeyimu okungcono kakhulu.
Okuhlangenwe nakho okusha: Lesi silawuli esithuthukisiwe se-PS-4 siphendula ngokushesha, cishe akukho ukubambezeleka kanye nokukhukhuleka.Izipikha ezakhelwe ngaphakathi kanye nojeke we-headphone we-stereo, ungaxhuma ama-headphone angu-3.5mm ukuze ujabulele igeyimu ngaphandle kokuphazamisa umndeni wakho nabangane.
Idizayini ekhethekile:Lesi sibambo se-PS-4 samukela isitayela somuntu siqu se-graffiti futhi singasetshenziswa njengesipho esifanelekile sezinsuku zokuzalwa, uKhisimusi noSuku Lwezingane, okwenza umndeni wakho, abangani noma izingane zijabule nsuku zonke!
Iphakheji ihlanganisa: Isilawuli se-PS-4 x1, intambo yokushaja ye-USB encane x1